MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE MASTIFF DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Mastiff Dog iyo Sawirro
Duke wuxuu tusaale wanaagsan u yahay nin 18-jir Mareykan ah oo Mastiff ah oo qaba jaakad fawn ah.
5 bilood jir Jarmal ah eey adhijir ah
Mastiffka Mareykanku wuxuu leeyahay af aad uga qalalan mastiffyada kale. Afka qalalan waxaa sabab u ah inuu ka gudbo Ingiriisiga Mastiff Anatolian Mastiff, taas oo dhacday horaantii horumarinta taranka. Mastiff Mareykanku waa eey weyn, weyn oo xoog badan. Madaxa waa mid ballaadhan, culus oo qaabdaran. Indhuhu waa midab midab leh, ka madow ayaa ka fiican. Dhegaha waa la duubaa oo madaxa kor baa loo saaraa. Afku waa mid dhexdhexaad ah, oo si fiican loogu dheelitiray madaxa, kaas oo leh maaskaro madow. Sanku waa madowyahay. Waxay leedahay qaniinyo maqas ah. Qoorta ayaa xoog badan oo xoogaa qaloocsan. Laabku waa qoto dheer yahay, ballaadhan yahay oo si fiican u wareegsan, oo hoos ugu dhacaya heerka xusullada. Feerahu si wanaagsan ayey u soo if baxeen oo si fiican ayey dib ugu dheereeyeen. Dhabarka ayaa toosan, muruq iyo awood leh, oo muruqyo muruqsan oo xoogaa qaloocsan leh. Xididdada hore waa xoog badan yihiin, toosan yihiin oo si fiican loo kala soocay. Lugaha gadaal waa ballaaran yihiin waana is barbar socdaan. Cagaha waa weyn yihiin, si fiican u qaabeysan oo isafgaran leh suulasha qaansoleyda .Dabada ayaa dheer, oo gaareysa hocks. Eydu badanaa waxay ku dhashaan mugdi waxayna iftiimiyaan markay weynaadaan, qaarkoodna waxay noqdaan faq aad u fudud da 'ahaan da'da qaar waxay hayaan timaha madow. Midabada waa fawn, abrikot iyo brindle. Calaamadaha cad ee la aqbali karo cagaha, xabadka iyo garka / sanka. Dabeecadda: Sharafta halkii ay ka ahaan lahayd mid deggan oo deggan, deggan, jacayl iyo daacad ah. Difaac, laakiin aan dagaal ahayn.
Mastiff Mareykan ah wuxuu jecel yahay carruurta wuxuuna gabi ahaanba u heellan yahay qoyskiisa. Waa dagaal la'aan marka laga reebo xaaladahaas marka qoyskeeda, gaar ahaan carruurta, loo hanjabo. Xaaladahaas waxay noqoneysaa difaac geesi ah. Mastiff Mareykanku waa mid caqli badan, naxariis badan oo jilicsan, dulqaad badan oo wax fahma, aad u jecel dadkiisa, xishood iyo xumaan midna ma leh. Waa mid daacad ah oo u heellan Maaddaama eeyahaani ay yihiin nooca Mastiff oo ay u koraan si aad u ballaaran, noocani waa inuu la joogaa oo keliya milkiilaha garanaya sida loo muujiyo Ujeedada tababarka eeygan waa in gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markaan aadane la noolaano eeyaha waxaan noqonaa xirmooyinkooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeeysaa hal khadadka hogaamiyaasha si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta.
Dhererka: 28 - 36 inji (65 - 91 cm)
Miisaanka: Ragga 160 illaa 200 rodol (72 - 90 kg) Dumarka 140 - 180 rodol (63 - 81 kg)
Mastiffs-ka Mareykanka waxay u muuqdaan kuwo caafimaad qaba, eeyo faraxsan oo leh dhacdooyin yar oo la soo sheegey oo badan oo ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee aad ku aragto noocyo kale oo waaweyn.
Mastiffs-ka Mareykanka ayaa ku ganaaxa guri dabaq ah jimicsi maalinle ah oo socod socod ah uu sameyn doono, ama ku orodka barxad deyr leh. Markay sii gaboobaan waxay u muuqdaan inay noqdaan caajis yar. Iyagu gudaha kama hawl galaan ('baradhada sariirta') iyo daarad yar ayaa sameyn doonta.
Mastiffs waxay u janjeeraan inay caajis noqdaan laakiin waxay lahaan doonaan jimicsi iyo farxad haddii la siiyo jimicsi joogto ah. Sida eeyaha oo dhan, Mastiff-ka Mareykanka waa in la qaataa socod maalinle ah si looga caawiyo sii deynta tamarta maskaxeed iyo tan jireed. Waxay ku jirtaa dabeecadda eyda in la socdo. Had iyo jeer waa in lagu xaraashaa meel fagaare ah.
Qiyaastii 2 ilaa 5 eey
Jaakad jilicsan oo gaaban, ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Ku caday burush adag oo tirtir oo ku tirtir xoogaa shukumaan ah ama jahwareer dhammaystiran dhalaalka. Maydho ama shaambo qalalan markay lagama maarmaan noqoto. Noocani waa celcelis daadiya.
Waxaa soo diyaarisay Fredericka Wagner oo ka socota Piketon, OH, kana socota Flying W Farms iyadoo ka talaabaysa Mastiffka Ingriiska oo ay weheliso Anatolian Mastiff. Eydii soo baxday waxay lahaayeen fir fircoon, xariiq adag bushimaha hoose oo ma aysan liqin sida ugu badan ee taranka Mastiff xulashada intaas ka dib ay u ilaalisay afka qalalan.
AMBC = American Mastiff brereeders Council
BBC = Naadiga Bulldog ee Backwoods
Bean waa Mastiffkeena Mareykanka. Isagu waa 14 toddobaad waana caqli badan yahay. Wuxuu ahaa mid aad ufudud tareenka dheriga . Waxay ku qaadatay isaga hal toddobaad inuu ogaado. '
'Bean waa ciyaar ciyaar marka uu doonayo inuu noqdo laakiin wuxuu jecelyahay hurdada waxkastoo ka badan, sidoo kale wuxuu jeclaan karaa inuu wax yar cuno. Layligiisa wuxuu kakooban yahay kor iyo hoos jaranjarada kadib 2 eey ee kale. ''
Bean wuu diidayaa inuu banaanka u baxo socdaal inta barafku dhulka yaal. Wuxuu bartay 'fadhiiso' iyo 'gariir' dhakhso badan, in kasta oo uu wax ka baran doono daaweyn wanaagsan. Isagu waa nin aad u jecel oo kalgacal leh. Waa inuu ku jiifsadaa dhabtaada ama agtaada inta uu wax ka sameynayo la ciyaarta eeyaha kale ama hurdada. Wuxuu ahaan jiray 7 lbs laakiin waxaad moodaa inuusan ka yarayn todobaad wuxuu ahaa 15 rodol. Ma sugi karno inuu noqdo qof weynaaday, laakiin jecel kaligiisa maalmood eey . '
Bean sida eey yar
Eeg tusaalooyin badan oo Mastiff Mareykan ah
Sawirada Mastiffka Mareykanka 1
Sawirada Mareykanka Mastiff 2
Sawirada Mastiff Mareykan 3
xoolaha Australia darka CORGI eey
sawirada usha corso mastiff
boqorka madow iyo cadaanka charles spaniel
alaskan klee kai cawl iyo cadaan
waa maxay eeyga nooca uu yahay hooch
Boqor Charles isku darka bichon cavalier